LG G7 ThinQ na-enweta mmelite na-agbakwunye nkwado maka VoWiFi | Gam akporosis
LG G7 ThinQ na-enweta mmelite ọhụrụ nke na-agbakwunye nkwado maka VoWiFi
Na e wepụtara ya na Mee 2018 apụtaghị na enweghị nkwado ugbu a. Na LG G7 ThinQ ị na-aga n'ihu na-enweta mmelite ngwanrọ, na nke kachasị ọhụrụ ị nabatara malitere ịgbasa naanị awa ole na ole gara aga, dị ka ihe akaebe nke ahụ.
Ngwunye ngwa ngwa ọhụrụ, nke na-abịa na ekwentị site na OTA, na-eji nwayọọ nwayọọ agbasasị. Nke a pụtara na ọ dị ugbu a naanị maka nkeji ole na ole, ọ bụghị na mba niile. Agbanyeghị, anyị nwere olile anya na n'ime ụbọchị ole na ole ọ ga-agbasaala ụwa niile.
Ihe kachasị mkpa dị na PKQ1.181105.001 nke sọftụwia maka LG G7 ThinQ bụ nkwado maka VoWiFi. Ọ bụrụ na ị maghị, atụmatụ a na-enye gị ohere ịkpọ oku olu na njikọ Wi-Fi, ọ bụ ezie na ọ bụghị ndị na-ebu ya niile dakọtara na ya.
OTA choro nbudata ihe di ka 670MB. Firmware adịghị emelite G7 ThinQ na gam akporo 10, mana ọ na - eme ka ọkwa nchekwa gam akporo gam akporo na smartphone dị ka nke March 1, 2020, nke enwere ekele.
Na ajụjụ, mmelite a na-amalite ugbu a na India. Na mgbakwunye na njirimara VoWiFi, ọ na-agbakwunye mmezi ahụhụ dị iche iche, mmụba nke usoro, yana ọtụtụ njikarịcha dị mfe maka ahụmịhe onye ọrụ kacha mma.
Cheta na LG G7 ThinQ bụ njegharị nwere Qualcomm's Snapdragon 845, chipset flagship 2018. Ekwentị a na-arụ ọrụ na-arụkwa ọrụ dị ka ebe obibi maka ihu igwe IPS LCD 6.1 inch na mkpebi FullHD +, RAM nke 4/6 GB, ebe nchekwa dị n'ime 64/128 GB na ikike batrị nke 3,000 mAh na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa nke 18 W. O nwekwara igwefoto azụ abụọ nke 16 + 16 MP na ihe mmetụta 8 MP n'ihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » LG G7 ThinQ na-enweta mmelite ọhụrụ nke na-agbakwunye nkwado maka VoWiFi
A oké ndakpọ nke LG ika anaghị akwado ma ọ bụ ihe ọ bụla emelitere na mbụ i MODomi M ka na OreO karịa afọ 2 gara aga, ihere
eme Ọnwa 12
O di nwute banyere ulo oru LG na mmelite nke usoro oru, ka na ANDROID 9
Netflix gosipụtara ụdị HDR10 dakọtara na Sony, Xiaomi na Oppo
Nke a bụ ụbọchị ntọhapụ nke Meizu 17, ọkọlọtọ na-esote ya na Snapdragon 865